Iibhate zokuhlamba abantwana: iintlobo kunye nemithetho yokukhetha
Abantwana Psychology kunye nophuhliso
Iibhate zebhati ziyimpawu ezibalulekileyo kuzo zonke iintsapho apho umntwana ebonakala khona. Umntwana uthengwa ngokukhawuleza ngaphambi kokuzalwa komntwana. Ukuba ngaphambili ukukhethwa kwamabhafu kwakunqongophe kakhulu, ngoku unokukhetha ukuhlamba kuyo yonke into, umbala kunye nekhredithi. Abavelisi basekhaya nabangaphandle, imibala eyahlukeneyo kunye nemizekelo, ukhetho lukhulu kakhulu kwaye amehlo aphakama. Ngoko ukhetha njani ubhedu obhetele kumama wakho kunye nosana? Lo mbuzo uphendulwa kule nqaku.
Kutheni ndifuna ibhati lokuhlamba, kwaye yintoni na ?
Ukuba intsapho yakho inomntwana, kufuneka uyithenge i-van ehlukile. Ukuwahlamba ngokungaqhelekanga, kwaye ngaphandle kwesikhumba sentsana esandula kuzalwa, sinokuhlambalahla kakhulu kwiindawo zokuhlamba i-gel okanye i-foam yokuhlamba, okubangela ukuba i-infertility in baby. Sekunjalo, kuba ukuba ibhethi ingafakwa, umzekelo, etafileni, uze uhlambe umntwana kwikhati enkulu, kufuneka uguqe, ugobe ngaphesheya kwibhebhu, ubambe umntwana ngesandla esinye, uhlambe omnye. Ngamanye amaxesha ungeke uhlambe inkunzi ebhokisini elikhulu ngaphantsi kwamandla kamama wakho ngaphandle koncediso. Ukongezelela, kwiintsuku zokuqala zobomi umntwana uthengwa ngamanzi abilisiwe, kwaye ukuzalisa ibhafu enkulu ngamanzi amaninzi kunengxaki.
Iimarike zanamhlanje zinamabhafu amaninzi ahlukeneyo, nangona kunjalo, ezithandwa kakhulu yizona: i-anatomical, "isisu somama", i-classical, ifenitshala yabantwana kunye ne-inflatable.
Ngoko, qwalasela oku kukhetha:
Kubhalwa kweAnatomic. Inokwakheka okhethekileyo "entabeni", ephindaphinda umlo womzimba wengane, ngenxa yoko le ntloko yomntwana iya kunyuswa ngaphezu kwezinga lamanzi, ekhulula izandla zikaMama kwaye inokuhlamba umntwana ngaphandle koncedo. Xa umntwana efunda ukuhlala, kuya kuba lula ukuhlamba kwindawo yokuhlala kwindawo yokuhlamba, ekubeni imilenze ayayi kuhamba, kwaye akayi kuludibanisa okanye, ngokubonga kwi-slide yama-anatomiki. Kodwa kukho i minus. Kulo kubhabha ukubeka umntwana kwisisu sakhe asiyi kusebenza.
Ibhedi endala yokuhlamba. Yenziwe ngeplastiki okanye iyakunjwa, kwiimilenze ezizinzile. Le ibhafu ingafakwa kwindawo yokuhlamba enkulu, etafileni. Kwaye xa umntwana ehleli phantsi, unokudlala kunye neetayayi kulo mbhobho. Ukunciphisa lolu hlobo lokuhlamba kukuba kufuneka uhlambe umntwana kuwo. Omnye wabazali uhlamba, enye isekela umntwana ngentloko.
Kungekudala, kubonakala iibhate kwiimarike, ezinokufakwa kwiindawo zokuhlamba ezinkulu. Ubungakanani babo bunzima kwaye bafanelekile kwiibhafu ezininzi. Kodwa ngaphambi kokuba uthenge kuyimfuneko ukujonga ukuba ibhafu ifanelekile ibhafu elikhulu. Ukugqithiswa kwalo mzekelo kukuba ibhafu ingashenxiswa, ngoko ke ngaphambi kokuba uhlambe, kufuneka uqaphele ukuba indlela yokuhlambela ngokuqinileyo isilungele ngayo.
"Umama womama." Lo mzekelo ufumene eli gama kuba liphinda umlo wesisu somfazi okhulelwe. Kulo kubhabha, umntwana uyaziva ekhuselekile. Le ibhati ibenziwe ngebhakethi. Kukulungele ukuthulula nokuthulula amanzi kulo, umva womntwana uxhaswa kakuhle kuwo. Ubushushu bamanzi obuhlala rhoqo bugcinwa kwimitha engamashumi amabini, kwaye ibhubhe ibonelelwe neleta ekhethekileyo ebonisa izinga lamanzi elifunekayo.
Ubhabha lwebhitshi kwiikhabhi zokuhlamba. Isibhakabhaka esincinci esincinci, esixhotywe kwisihlalo kunye nomngxuma. Kukulungele ukuhlamba abantwana "abasele", kuba abantwana abasanda kuzalwa abafanelanga. Ingasetyenziselwa kokubili ekhaya nangaphandle, kushushu.
Ibhebha yokuhlamba. Ngaba i-thermometer eyakhelwe ngaphakathi kunye nesitya sesepha. Ingaphakathi lokuhlamba ineempahla ezikhethekileyo, ukukhusela umntwana ukuba angabikho. Uxhotyiswe imilenze ezinzile, okukuvumela ukuba uyibeke etafile okanye kwindawo yokuhlamba enkulu. Kwakhona kukho inkqubo yokucoca amanzi, e-thermometer, eyenza kube nzima ukuvula umngcipheko womngcipheko kumntwana.
Kubhebha. Kubaluleke kakhulu kwiindawo zokuhlala ezincinci, ezifanelekileyo kwiindawo zokuhlala. Iyakwazi ukukhawuleza ihluthe kwaye ikhuphe ngokukhawuleza. Ngaba "umlotho" okhethekileyo ngentloko yengane.
Kubhalwa kwe-Antibacterial. Ibhafu yeplastiki equkethe i-antiseptic - microbial. Itshabalalisa amabhaktheriya ahlukeneyo angaphandle. Iplastiki igcina inqanaba eliqhubekayo le-antiseptic, elikuvumela ukuba ungahlamba ibhedi kunye ne-detergents, edla ngokubangela ukunyamekela kwiintsana.
Iibhitshi zangasese ezakhiweyo. Eyona nto ilula kakhulu kuba yonke into oyifunayo isondele. Umntwana akadingeki ukuba athathwe ukusuka kwindawo yokuhlambela ukuya kwigumbi lokulala. Amanzi athululelwa kwi-hose ekhethekileyo. Kwaye ukuba, ngaphezu kwezinto zonke, umzekelo awufuneki ukususwa kwebhodi eguqukayo, ngoko ke ubuncwane bokwenene kubazali. Emva kokuhlamba umntwana, unokukhawuleza ubeke ibhodi uze uguqe ithawula.
Indlela yokukhetha isitya esifanelekileyo
Umlinganiselo oyintloko wokukhetha ibhebha yentsana bubungakanani bendlu yakho. Nangona kunjalo, kulungile ukukhumbula ukuba awukwazi ukukhetha encinci encinci. Kuya kuba nzima kumama nomntwana. Ubhate kufuneka luzinze, kungabi lukhulu, kangangokuthi xa kungekho ntombi, umama angazithumela umntwana wakhe. Ibhedi kufuneka ibe neengubo, ukuze umntwana angaphumi emanzini. Kufuneka kubekho umgodi wokucoca amanzi, kuba amanzi okubilisa ekuhlambeni ngumsebenzi omude, kwaye ukuba uyaphakamisa i-vanilla uze uwuthulule ngaphandle, ungayiphula.
Ukuba igumbi lakho likhulu kwaye livulekile, kwaye wanquma ukuthenga ibhagi eyakhelwe ngaphakathi, uze uyiqwalasele ngokucophelela kwivenkile. Ngaba kulungile, ngaba unokukhawuleza ukuhluthwa kwaye kuhlanjululwe, kwaye akuyi kuba mfuneko ukubamba umntwana ngokungabi nesisindo emva kokuhlamba, ukwenzela ukubeka ibhodi eguqukileyo etafileni. Kufanelekile ukuthobela umbala webhabha. Ngamanye amaxesha iintsana ziza kufuneka zihlambele kwisisombululo se-manganese, kuba i-antiseptic. Kwaye i-lighter ibhabha yinto echanekileyo, iya kuba yinto echanekileyo kuyo kuba ukuchaneka ngokufanelekileyo kwe-permanganate ye-potassium. Ngaphambi kokuba uthenge umntwana, qiniseka ukuba unokukhawuleza ukuhambisa ityhudling table kwaye uyifake ithawula.
Indlela yokuchazela abantwana ukuba kutheni iintaka zinyuka
Imidlalo yemidlalo njengendlela yokufundisa
Umntwana wakho ufuna i-nanny
Izindlela ezintsha zokuphuhlisa umntwana
Ukukhweleka komntwana kumhlobo kayise
Ndingahamba phi nomntwana, ukuzizonwabisa
Indlela yokwakha ubudlelwane nentombazana
URudkovskaya no-Plushenko baxosha abamelwane babo
UAlbina Dzhanabaeva waphuma ngomngcingo womtshato
Indlela yokuphuhlisa ikhono lomntwana
Khetha umbala weenwele ukujamelana nazo
Iimfesane ezincinci zentsimbi zabasetyhini
Indlela yokuba nokuhlala evuya ngakumbi?
I-Speeddating: inyathelo elinqabileyo elingaziwayo elitsha
Iqoqo le-Autumn le-nail polish esuka ku-Essie: Intombi yeViet kunye neLiggy Legend
Indlela yokujongana nemibuso yobuso
Kulichi kwi margarine
Tuna nge-sauce ye-pepper yaseBulgaria
Ikhalenda yeZiko le-Orthodox yeSonto ngo-2016
Imilenze yenkukhu ethosiweyo
Ubudlelwane bobazali bootata, oomama kunye nabantwana
Indlela yokunceda umntwana wakho afunde
Unobhala oqeshwe ngabanye